महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन सक्छ ? – साइन्स इन्फोटेक
डिसेम्बर 29, 2019 डिसेम्बर 29, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments गर्भ, महिनावारी, सेक्स
महिनावारी भएको कति दिनमा सेक्स गर्दा गर्भ रहन सक्छ ? यस्ता कुरा हरेक दम्पतीले बुझ्न आवश्यक छ । आज इच्छा हुदाहुदै पनि गर्भ नरहनुको पिडाले धेरै दम्पतीलाई सताएको छ । आजको लेखमा यसै विषयमा प्रकाश पार्नेछौं । गर्भ नरहनुका अन्य थुप्रै कारणहरूमा प्रयाप्त शुक्रकिट नरहनुलाई पनि मान्न सकिन्छ ।
ढल्कदो उमेरले पनि कतिपय अवस्थामा गर्भ नरहन सक्छ । गर्भ रहनुमा महिनावारी ठिक समयमा हुनुपर्ने हुन्छ । कतिपय महिलाको महिनारी ठिक नहुनुको कारणले गर्दापनि गर्भ नरहन सक्छ या शुक्रकिट जाने नलि अबरोध भएका कारणले पनि गर्भ नहुन सक्छ ।
चाहे जेहोस् गर्भ नरहनुका ठोस कारण पत्ता लगाएर गर्भ रहने उपायतर्फ लाग्नु नै ठिक हुन्छ । यहाँ कुन-कुन समयमा सम्पर्क राख्दा गर्भ रहन सक्छ भन्ने’bout लेख पस्कन गइरहेका छौं किनकी महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ । नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ भने कहिले धेरैपटक यौन सम्पर्क हुँदा पनि गर्भ रहँदैन । यौनसम्पर्कका बेला पुरुषको वीर्य स्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा पुग्छन् ।
त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्ब अण्डासँग असंख्य शुक्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा यौनसम्पर्क, वीर्य स्खलन, डिम्ब निषेचन र डिम्बरोपण जस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ । महिलाको डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ ।
डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ । डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४ औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।
प्राय: महिनावारीको नवौं दिनमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना न्यून हुन्छ । महिनावारी ठीक २८ दिनमा नभएर ढिलो चाँडो हुनेमा यो विधि प्रभावकारी मानिन्न । सुरक्षित काललाई नै गर्भनिरोधकका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने कम्तीमा पनि ६ महिनासम्मका महिनावारीका दिनहरू लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा छोटो महिनावारीबाट १८ दिन घटाउँदा गर्भवती हुन सक्ने पहिलो दिन पत्ता लाग्छ भने सबैभन्दा लामो दिनबाट ११ दिन घटाउँदा गर्भवती हुन सक्ने अन्तिम दिन पत्ता लाग्छ । उदाहरणका लागि यदि कुनै महिलाको महिनावारी चाँडोमा २४ दिनको र ढिलोमा ३१ दिनको हुने रहेछ भने, २४ बाट १८ घटाउदा ६ हुन्छ, अर्थात् छैटौं दिनदेखि सम्भोग गर्दा गर्भ रहन सक्छ । ३१ बाट ११ घटाउदा २० हुन्छ, अर्थात् २० औं दिनभन्दा पछि यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहन सक्छ ।
उपरोक्त कुराको जानकारी हरेकमा भए गर्भ रहने सम्भावना बढी हुने गरेको हामीले धेरै दम्पतीबाट पत्ता लगाएका छौं । अर्को कुरा पुरूषको शुक्रकिट अस्वस्थ भएमा या दुवैमा भिटामिन ईको कमिले गर्दा पनि गर्भ नरहन सक्छ ।
*लामो समयसम्म उपचार गर्दा-गर्दा थाक्नु भएको छ या दुवैको केहि समस्या नहुनाले गर्भ नरहेको भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ । हाम्रो मोबाइल नम्बर ९८५७०४०२९८ मा सोझै सम्पर्क राखेर आउनुस हामी तपाहरूको समस्या समाधान गर्नेछौं ।
गर्भवती र रक्तचाप
← महिलाको अधिकार र नेपालको अवस्था
फूल्न लागेको आँप जुन एकपटक हातमा दल्दा पार्छ रोग निको →
जनवरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
सेप्टेम्बर 16, 2016 डिसेम्बर 30, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3